Mpanamboatra fandriana maro-miasa | Fandriana plastika maro-mihetsika Foldable, mpanamboatra
Ny fandriana hopitaly fitsaboana azo ahodina B10
Ity dia fandriana escort mpitsabo nataonay. Azo aforitra ary apetraka amin'ny zorony rehefa tsy ampiasaina, ka tsy mila toerana malalaka.
Fandriana patiet manual telo miaraka amina lohan'ny fandriana ABS A02-6
Ny fandriana hopitaly miisa telo dia manana lamosina, fialan-tsasatra amin'ny tongotra ary fanitsiana ny haavony. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny toerana misy ny lamosin'ny tongony sy ny tongotr'ilay marary dia ahitsy araka ny filan'ny marary sy ny filàn'ny mpitsabo, izay manampy amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny lamosina sy ny tongotra ary hampiroborobo ny fizotry ny rà.
Fandriana hopitaly mandeha amin'ny herinaratra dimy A01-1
Ny haavon'ny fandriana dia vita amin'ny takelaka vy manaparitaka mangatsiaka avo lenta. Iray - tsindrio afovoany hidin-trano afovoany hidy efatra amin'ny fotoana iray. ABS anti-collision boribory fandriana lohan-doha feno koronosy, tsara tarehy sy malala-tanana.
Hopitaly herinaratra miisa dimy miasa icu fandriana A01-3
Ny fandriana hopitaly miasa dimy dia manana lamosina, fitsaharana amin'ny tongotra, fanitsiana ny haavony, trendelenburg ary fiovan'ny toetr'andro trendelenburg. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny toerana misy ny lamosin'ny tongony sy ny tongotr'ilay marary dia ahitsy araka ny filan'ny marary sy ny filàn'ny mpitsabo, izay manampy amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny lamosina sy ny tongotra ary hampiroborobo ny fizotry ny rà. Ary ny haavon'ny haavon'ny fandriana mankany amin'ny gorodona dia azo ovaina amin'ny 420mm ~ 680mm. Ny zoro ny trendelenburg sy ny fanovana trendelenburg mivadika dia 0-15 ° Ny tanjon'ny fitsaboana dia tratra amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny toeran'ny marary manokana.
Fampandehanana hopitaly fiasan'ny hopitaly dimy A01-2
Farafara fandriana marary an-tanana roa crankitaly B15
Famaritana ny vokatra anarana: farafara fitambarana modely Model: B15 Halava feno: 2090mm Sakany feno: 900mm Haavo ny haavon'ny fandriana: 550mm ID ny halavany: 1950mm Ny zoro fampiakarana miverina: 0-75 ° Ny zoro fampiakarana tongotra: 0-45 ° Fampitana entana: Width250kg ID sakany: 1250mm Loham-pandriana 、 faran'ny fandriana: Farafara ahitàna ABS, fantsom-by tsy misy fangarony lalàm-panorenan'ny farafara fandriana: 20 * 40mm fantsom-baravarankely fisakanana Guardrail: sakana plug-in Casters: 125mm casters mangina Cranks: Metal fold crank tanana miafina Tsy voatery: hazo manokana ...
Fampiasana marolafy 3 crank traction hopitaly fandriana B07-1
Ity vokatra ity dia karazan-pandriana vaovao izay manohana ny fivezivezena mekanika (tanana) hampiharina. Ny vokatray dia manana fiasan'ny fampiakarana miverina sy ny fisarahana tongotra.
Fandriana marary any amin'ny hopitaly mihombo 3 crank miaraka am-pandriana ABS B07
Ny vokatray dia manana fiasan'ny fampiakarana miverina sy ny fisarahana tongotra. Ny famitana amin'ny talantalana eo amboniny dia afaka manampy ny marary amin'ny asa fanarenana. Ny fandriana amam-pandriana dia karazana fitaovana vaovao izay mampiasa fampitana mekanika mba hitrandrahana.
4 crank five function manual hopitaly A01
Ny fandriana hopitaly miasa dimy dia manana lamosina, fitsaharana amin'ny tongotra, fanitsiana ny haavony, trendelenburg ary fiovan'ny toetr'andro trendelenburg. Mandritra ny fitsaboana isan'andro sy ny fitaizana be antitra, ny toerana misy ny lamosin'ny tongony sy ny tongotr'ilay marary dia ahitsy araka ny filan'ny marary sy ny filàn'ny mpitsabo, izay manampy amin'ny fanalefahana ny tsindry amin'ny lamosina sy ny tongotra ary hampiroborobo ny fizotry ny rà.